Selaco: iyo FPS yeavo vakadhirowa neKUTYA | Linux Addicts
Selaco: FPS yeavo vakadhirowa neKUTYA
Isaac | 23/04/2022 12:28 | Linux Mitambo, chiutsi
Selaco izita reFPS (Munhu Wekutanga Shooter), kureva, munhu wekutanga kupfura semamwe akawanda mazita. Asi demo iri rinouya nekukurumidza. Uye ichaita saizvozvo neshungu, sezvo iri mutambo wevhidhiyo unofemerwa neKUTYA, imwe yemitambo yakakurumbira yemakore mashoma apfuura yeWindows uye kuti vazhinji vaive vakabatikana pairi nekuda kweiyo mutambo dynamics, magiraidhi ayo, uye. zviya zvekutyira zvakawanda zvakanzi...
Selaco ichave zvakafanana neKUTYA asi, kusiyana neimwe iyi, ichasvika semultiplatform, pakati pemasystem anotsigirwa zvakare Linux. Ichasvika ichifambiswa neGZDoom uye iyo demo ichave yakagadzirira munguva pfupi kuti iwe uedze ruzivo rwainogona kupa. Nezviitiko zvinoshamisa zvizere nekuita, kuparara, uye yakangwara kwazvo AI izvo zvinozoita kuti zviome kwauri, pamwe nenyaya yakagadziridzwa kuve inonyudza sezvinobvira.
Izvo zviitiko zvinokuyeuchidza nezveKUTYA, uku uchiwedzera mamwe echinyakare retro zvinhu izvo zvinoda acharangarira DOOM uye KUDENGENDA, pamwe chete nezvimwe zvazvino uye zvechokwadi zveSelaco maficha.
Nyanzvi nyanzvi (avo vakapinda muzvirongwa zvine mukurumbira muindasitiri yemitambo munguva yakapfuura) vanoshanda pachirongwa ichi chavakatumidza kuti Selaco kugadzira musanganiswa uyu chiito uye chakavanzika.
Nguva pfupi yadarika mugadziri akaratidzira vhezheni yakagadziridzwa ine preview, ichiratidza hunyoro hunoita senge mune yazvino mamiriro, kuti isu tinorangarira kuti haisi vhezheni yekupedzisira, asi demo yekuyedza. Iyo demo haigone kurodha pasi, asi yakarongwa kuuya kuSteam munaJune gore rino, kuvhara kutsigira paPatreon papuratifomu muna Kubvumbi 22.
* Cherechedza: pano ini ndinosiya chinongedzo kuValve's Steam, kunyangwe risati rave zuva rekuburitswa. Asi nenzira iyoyo, kana nguva yasvika unogona kuedza Selaco.
Rumwe ruzivo uye kurodha kweSelaco - official steam site
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Selaco: FPS yeavo vakadhirowa neKUTYA
Zvakanaka ivo havana kupenga, kana paine chavakavhunduka, asi neiyi tichavhunduka nekuti haisi muchiSpanish uye imwe yacho ndosaka takavhunduka, pane musiyano mukuru.
Pindura kuna Filparon
WINE 7.7 inosvika nekuvandudzwa kweX11 uye ingangoita mazana mana shanduko